भेडे खुर्सानी सेवन गर्नु भएको छ ? थाहा पाउनुहोस भेडे खुर्सानी सेवन गर्नुका यति धेरै फाइदाहरु – Annapurna Daily
भेडे खुर्सानी सेवन गर्नु भएको छ ? थाहा पाउनुहोस भेडे खुर्सानी सेवन गर्नुका यति धेरै फाइदाहरु
On Jul 15, 2021 3,979
भेडे खुर्सानीकाे औषधीय गुण के हाे ? भेडे खुर्सानीको सेवनले ठन्डी, दम, श्वासप्रश्वास प्रणालीमा समस्या र अर्वुद रोगसंग लड्ने क्षमता बढाउँदछ । भेडे खुर्सानीमा के के पाइन्छ ? भेडे खुर्सानी पोषिलो फल तरकारी हो । यो खुर्सानी भिटामिन “ए” र “सी” मा निकै धनी छ ।
भेडे खुर्सानीकाे प्रयाेग कसरी गरिन्छ ? नेपालमा भेडे खुसार्नीको हरियो फलको प्रयोग गरिन्छ । भेडे खुर्सानीको सलाद, पकाएको तरकारी वा अचार बनाएर प्रयोग गरिन्छ । यसको बासना र स्वाद धेरैलाई मीठो लाग्दछ ।
जानौं भेडे खुर्सानीका फाइदाहरू: मेटाबोलिज्म बढाउनमा मद्दत गर्छ: तौल घटाउने सोच भएकाहरूका लागि भेडे खुर्सानीको सेवन निकै लाभदायक हुन्छ । यसमा क्यालोरी नगन्य मात्रामा हुन्छ जसले तौल घटाउनमा मद्दत गर्छ । यसले मेटाबोलिज्मको प्रक्रियालाई सक्रिय बनाउँछ ।
एन्टी अक्सीडेन्ट गुण: भिटामिन ए र सीले भरिपूर्ण भेडे खुर्सानी एन्टी अक्सीडेन्ट्सको राम्रो स्रो पनि हो । साथै मुटुसँग सम्बन्धित रोग, दम र मोतियाविन्दुबाट पनि बचाउनमा मद्दत गर्छ ।
क्यान्सरबाट बचाउँछ: भेडे खुर्सानीको सेवनबाट क्यान्सरको कोषलाई विकसित हुन दिदैँन । भेडे खुर्सानीको प्रयोग दिनहुँ कुनै न कुनै रुपले गर्नुपर्छ । भेडे खुर्सानीको सेवनले क्यान्सर हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।
दुखाईमा राहत: भेडे खुर्सानीमा यस्तो तत्व पाइन्छ जसले छालाको दुखाईलाई स्पाइनल कोड सम्म जान दिदैँन । साथै यसमा पाइने तत्व प्राकृतिक पेनकिलर समान काम गर्छ ।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ: भिटामिन सी ले भरिपूर्ण भेडे खुर्सानीले संक्रामक रोगहरूसँग लड्न मद्दत गर्छ । साथै शरीरमा रोग–प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई वृद्धि गर्न पनि भेडे खुर्सानी उपयोगी हुन्छ । भेडे खुर्सानीको नियमित सेवनले फोक्सोको इनफेक्शन, दम जस्ता समस्यामा पनि राहत मिल्छ ।